Enwere Ton nke Bara Uru maka B2B na Social Media | Martech Zone
Enwere Ton nke Bara Uru maka B2B na Social Media
Fraịde, Septemba 25, 2015 Douglas Karr
Quickfọdụ ngwa ngwa B2B Social Media stats:
83% nke ụlọ ọrụ B2B tinye ugbua na soshal midia!
77% nke ụlọ ọrụ B2B na-atụ anya mee ka oge nọrọ na-elekọta mmadụ na-esote afọ.
35% nke ụlọ ọrụ B2B ugbu a denye aha na nlekota oru mgbasa ozi n'elu ikpo okwu.
Dịka onye ahịa B2B n'onwe m, ọ na-atụ m mgbe niile na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-ahụ B2B lagging n'azụ B2B. Mgbasa mgbasa ozi bụ ihe dị mkpa nke mmalite anyị na uto anyị kemgbe ọtụtụ afọ. Anyị nwere ihe ịtụnanya na-eso na Twitter, mmekọrịta mmekọrịta na-aga n'ihu na ntanetị Facebook, ebumnuche dị egwu na ụgwọ Facebook akwụ ụgwọ, ma na-elekwasị anya na LinkedIn.
Social media na-enye anyị ọtụtụ ohere:
Mkpakọrịta na ndị na-ege anyị ntị mata ozi ọma na ohere dee banyere.
Nlekota oru ndi mmadu ịchọta na ịchọta nnukwu ọdịnaya maka ndị na-ege anyị ntị.
Nlekota oru ndi mmadu maka ikwuputa na nkwalite nke ọdịnaya anyị.
Nkwalite nke ọdịnaya anyị - ma organic na akwụ ụgwọ.
Ebumnuche influencer ohere ịmekọrịta, ịkekọrịta na ịkwalite ibe.
Na, n'ụzọ ọ bụla, nkwalite nke ụdị na ọrụ anyị site na mgbasa ozi mmekọrịta na-enyere anyị aka ịkwado nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta maka okwu ndị na-ege anyị ntị na-akwalite na ntanetị weebụ ha niile. Ohere, ma ọ bụrụ na ịnọghị na mgbasa ozi mmekọrịta na ị bụ onye ahịa B2B ma ọ bụ onye na-ere ahịa - onye na-asọ mpi na-eri nri ehihie gị. Aga m akwado ihe ole na ole ịmalite:
Na-ebipụta onwe blog gị tinye na akaụntụ Twitter, Facebook na LinkedIn gị.
Jikọọ Otu Facebook na LinkedIn akọwapụtara na ụlọ ọrụ gị ịmalite ịmalite itinye aka na netwọkụ dị mkpa ebe enwere ike ịchọta atụmanya.
Malite na soro ndị isi ụlọ ọrụ na ịkesa ndị na-ege gị ntị ọdịnaya ha ka ha jikọọ na ha.
N’ikpeazụ, kpọọ ha dee akwụkwọ ndị ọbịa, soro na mkparịta ụka Podcast, webinar, ma ọ bụ ọbụlagodi tweetup.
Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ gị kwesịrị ịbawanye ma netwọk gị na ikike gị n'ime netwọkụ ahụ. Mgbe amatara gị dị ka akụ a tụkwasịrị obi, ọtụtụ ndị mmadụ ga-achọ ịzụ ahịa gị. Mepụta uru site n'inyere ha aka, ọ bụghị site n'ire ha, n'agbanyeghị!
Tags: b2bahịa b2bb2b mgbasa ozi mgbasa ozi
Iche ndi njem ahia nke ndi ahia
Mgbasa Ozi Mgbasa Ọha